Budata Ihe Nleba Info 100 maka $ 59 | Martech Zone
Monday, November 18, 2013 Saturday, October 20, 2018 Douglas Karr
Ọ bụghị ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ị nweta atụmatụ zuru ezu na atụmatụ nkwalite maka infographics. Nchịkọta anyị dị na ọnụahịa mana ọ na - ebido na ihe dịka $ 2,500 maka nyocha, imewe na nkwalite nke ozi izizi mbụ. N'ezie, nke ahụ dị anya na mmefu ego nke ọtụtụ ụlọ ọrụ. Na ụlọ ọrụ ndị nwere ndị na-emepụta enweghị ike ha na-arụ ọrụ ụbọchị na infographic echiche! N'ezie, anyị achọpụtala na nhụjuanya data bụ onyinye pụrụ iche a na-ahụghị na onye ọ bụla na-ese ihe.
Ma… ma ọ bụrụ na i nwere a mmebe na ga-amasị n'ịwa ihe infographic nyere ụfọdụ ndebiri, nwa nwoke anyị na mmekọ na Infographic.li nwere ịtụnanya ndibiat. Maka $ 59 US, ị nwere ike budata ihe ederede 35 pụrụ iche na ndebiri dị iche iche 105! Jide n'aka na iji njikọ njikọ anyị iji chekwaa ụda na onyinye a!
Zụta ndị na-ese ihe atụ gị Ugbu a!
Faịlụ dị na Photoshop (PSD), Illustrator (AI), Encapsulated PostScript (EPS) na Jpeg (JPG) formats! Nke a bụ naanị otu ihe atụ ka ị wee hụ ogo na oge abanyela na ndị a:
Tags: budata infographicsinfograph ndebiri infographicsinfographicihe omuma epsihe omuma ihe omumainfographic psdndebiri ndebiriInfographics Ahịa
GoSquared: Real-oge nchịkọta na Data